Vaovao - Ny fiaraha-miasa ara-toekarena feno (RCEP)
Ny fiaraha-miasa ara-toekarena feno (RCEP)
Fandresena ho an'ny multilateralisme sy ny varotra malalaka. Niely nanerana an'izao tontolo izao ny valanaretina, nihena be ny varotra iraisam-pirenena sy ny fampiasam-bola, voasakana ny fantsom-pamokarana sy ny fanatontoloana ara-toekarena ary nisy ny fitovizan-kevitra sy ny fiarovana. Ny mpikambana rehetra ao amin'ny RCEP dia nanao fanekena iraisana hampihenana ny sara, hisokatra amin'ny tsena, hampihena ny sakana ary hanohana mafy ny fanatontoloana ara-toekarena. Raha ny kajikajiana ny tobim-pieritreretana iraisam-pirenena, ny RCEP dia antenaina hampiakatra 519 miliara dolara amerikana amin'ny fanondranana ary 186 miliara dolara amerikana fidiram-bolam-pirenena isan-taona amin'ny taona 2030. Ny fanaovan-tsonia ny RCEP dia maneho tanteraka ny fiheveran'ny mpikambana rehetra mazava Fanjakana manohitra ny firaisankina sy ny fiarovana. Ny feo iraisana amin'ny fanohanana ny varotra maimaimpoana sy ny rafitra varotra marobe dia toy ny hazavana mamiratra ao anaty zavona ary onja mafana ao amin'ny rivotra mangatsiaka. Izy io dia hampitombo ny fahatokisan'ny firenena rehetra amin'ny fampandrosoana ary hampiditra angovo miabo amin'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena miady amin'ny valanaretina sy ny fanarenana ara-toekarena.
Manafaingana ny fananganana tambajotram-pifanakalozana malalaka manerantany
Ny Fifanampiana ara-toekarena feno (RCEP), natombok'ireo firenena folo an'ny ASEAN, dia manasa an'i Shina, Japon, Korea Atsimo, Aostralia, Nouvelle Zélande, ary India handray anjara ("10 + 6 ″).
"Fifanarahana fiaraha-miasa ara-toekarena feno" (RCEP), toy ny fifanarahana ara-barotra ao amin'ny faritra Azia-Pasifika, dia tsy maintsy hamokatra vokatra ara-barotra lehibe. Mifantoka amin'ny indostrian'ny famokarana manerantany, ny maodelin'ny GTAP dia ampiasaina hanamboarana ny fiantraikan'ny RCEP amin'ny fizarazarana ny asa eo amin'ny sehatry ny famokarana manerantany, ary hita fa ny RCEP dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fizarazarana ny asa eo amin'ny sehatry ny famokarana manerantany. Ny fanatontosany izany dia hanatsara ny toerana misy ny faritra Aziatika manerantany; Ny RCEP dia tsy vitan'ny fampiroboroboana ny famokarana sinoa fotsiny ihany koa ny fampitomboana ny fanondranana indostrialy sy ny fampitomboana ny tsena maneran-tany izay manampy amin'ny fiakarana ny rojom-bidy manerantany.
Ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fampidirana toekarena isam-paritra tarihan'ny ASEAN dia endrika fandaminana iray mba hanokanan'ireo firenena mpikambana tsena tsirairay avy ary hampiharana ny fampidirana toekarena isam-paritra.
Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tarif sy ny sakana tsy andoavam-bola, manangana fifanarahana varotra maimaimpoana miaraka amin'ny tsena mitambatra firenena 16
RCEP, fahitana tsara tarehy, dia ampahany manandanja amin'ny paikadim-pirenena iraisampirenena koa, ary afaka miandry sy mahita fotsiny isika!
2020, ny vidin'ny tsena vy any China dia ...
Ny Partn Economic Comprehensive Partn ...
Mpivarotra vy sy indostrian'ny indostria predi ...
Address: 2F, Trano Iraisam-pirenena ankehitriny, Distrikan'i Dongchangfu, Liaocheng, Shandong, Sina